မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့စကား ၅ ခွန်း
Home Child Teaching မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့စကား ၅ ခွန်း
ကလေးဆိုတာမျိုးက အတုခိုးလွယ်တတ်ကြတဲ့သူတွေပါ။ သင့်ပြုမူပုံသင်ပြောတဲ့အရာတွေကို လိုက်ကြည့်ပီး ပုံတူကူးတတ်ကြတဲ့ သဘာဝရှိသူတွေပါ။ ဒါကြောင့်လက်ဦးဆရာဆို မိဘတွေလို့ ရှေးစကားပုံတွေရှိလာတာပါ။ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုးသလား ရိုင်းသလားဆိုတာ မိဘတွေအပေါ် အများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ဖွံဖြိုးနေဆဲအချိန်မှာ စ ကားလုံးတွေကြောင့် တိုးတက်မှုတွေ လျော့ကျသွားနိုင်သလို သူ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေပျောက်သွားတာမျိုးတွေထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက ကလေးတစ်ယောက်ကို သင်ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ အရာ၆ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်.
ကလေးတစ် ဦး ကို“ မြန်မြန်လုပ်ပါ” လို့အဆက်မပြတ်ပြောတဲ့အခါ သူတို့မိဘတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေအတက်အကျကို သူတို့ဟာ အလွန်ကြောက်လန့်စိုးရွံလာပါတယ်။ ဒါဟာ အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးက ကလေးကို အမြန်လုပ်ဖို့ခနခန ပြောခြင်းဟာ ကလေးတွေကို စိတ်ဖိစီးမှုအပို ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုပြောတာထက် သင်မြန်မြန် လုပ်စေချင်တဲ့အရာကို ဂိမ်းတစ်ခု ပုံစံပြောင်းလဲပီးခိုင်းပါ။ ဆိုရရင် “ဖိနပ်ကို ဘယ်သူအရင်ပီးအောင်စီးနိုင်မလဲ” ထမင်းစားတာ ဘယ်သူပိုမြန်လဲ” “ကျောင်းကားဆီရောက်အောင် ဘယ်သူ အရင်သွားနိုင်မလဲ”ဆိုတဲ့ က လေးတွေအကြိုက်ပြောင်းပီး သင်ဖြစ်စေချင်တာကို မြန်အောင်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
ပြဿနာတစ်ခုခုကို ကလေးက စိတ်နှစ်ပြီး ခေါင်းတွေပူအောင် အဖြေရှာနေတယ် အဖြေကလည်းမရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ကိုယ့်ကလေးပင်ပန်းနေတာကို မကြည့်ရက်တော့ “ပေးပေး အမေပဲလုပ်ပေးမယ်”စသဖြင့်ပြောတတ်ပါတယ်။
သူတို့ရုန်းကန်နေရလို့ သင်ကလုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောလိုက်တာ ဘာမှမဖြစ်ရဘူး ထင်ပေမယ့် စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ က လေးဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးဟာ အဖြေတစ်ခုခုကို သူများဆီကရဖို့မျှော်လင့်နေတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမကိုးတတ်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးတွေကို အမေလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောမယ့်အစား”သားကိုမေမေကူညီပေးမယ်”ဆိုတဲ့ စကားမျိုးသုံးကြည့်ပါ။ သင့်ကလေးကို အဖြေကိုတိုက်ရိုက်မပေးပဲ တိုက်ရိုက်လုပ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူ့ကို အကြံပေးတာမျိုး သူ့ကိုအထောက်အကူပြုမယ့် မေးခွန်းလေးတွေမေးပေးတာမျိုးကနေ သူ့ပြဿနာသူဖြေရှင်းနိင်အောင်လုပ်ပေးပါ။
ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဒီစကားကတစ်ကယ် ကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သော်လည်းစည်းမျဉ်းများချမှတ်ခြင်းနှင့်အပြုအမူများကိုစောစီးစွာပြင်ဆင်ခြင်းက ဤသို့ဖြစ်ပွားခြင်းမျိုးကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးရဲ့ပါးစပ်ကို လုံးဝပိတ်ခိုင်းလိုက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် သူမျိုသိပ်စောင့်စည်းထားရတာတွေက တချိန်မှာ အန္တရယ်ရှိလာနိင်ပါတယ်။
ဒီစကားက ဟုတ်သလိုနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေလိုပဲ သူတို့လုပ်နိုင်စွမ်းတွေရှိပါတယ်။ မင်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားက သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ဆိုလိုတာက သူတို့ရဲ့တတ်နိုင်သလောက်လေးပဲလုပ်လည်း သူတို့အမေက “အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တာပဲလို့” ပြောနေမယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ “အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တာပဲ”ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ရှေ့ခရီးမှာ ဆင်ခြေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ” အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်”ဆိုတာနဲ့ အကောင်းဆုံးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ တူတာမှမဟုတ်ပဲလေ။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေက ကောင်းတာထက် အမြဲတမ်းပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
မင်းအရမ်းရှုပ်တယ် ပျင်းတယ် ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်
ပထမနဲ့တတိယဟာက ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးစရိုက်တွေကိုထိခိုက်အောင်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုမယ့်အစား ကလေးကိုပြောင်းလဲချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ပြောင်းလဲအောင်သာ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ သင်ပြောတဲ့စကားကို လက်ခံသွားရင် မခက်ပေဘူးလား? ပျင်းတယ်ဆိုတာကတော့ ပျင်းတာကိုကလေးက ဘယ်မှာသင်ယူလို့ရပါ့မလဲ? သူ့ကိုပျင်းအောင်လုပ်မိစေတဲ့ အကြောင်းတွေရှိလို့ပေါ့။ ဒါကြောင့်ကလေးတွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ ထိုးနှက်မယ့်အစာ’ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေနဲ့ပြောင်းလဲပေးပါ။ ကလေးဟာ ထုံသွားတတ်ပါတယ်။ သူ့အတွက် ခနခနကြားရတော့ ရိုးသွားတာပေါ့။
REF_Power Of Possiktivikty
Previous articleရောဂါပိုးတွေအလွယ်တကူ မဝင်ရောက်ဖို့ သင့်မိသားစုရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ကြပါစို့
Next articleတစ်မိသားစုလုံးရဲ့ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေး ကောင်းစေဖို့ လိုက်နာရမယ့်အချက်များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလနဲ့ တရုတ်အစားအစာများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဘေဘီလေးတို့ရဲ့ အသားအရေကို ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၅) ခု
ကလေးငယ်တွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်စေအောင် မိဘတွေ ပြုလုပ်မိတဲ့ အချက် (၇) ချက်
Mom and Baby176
Hein Myat - November 24, 2020 0